Fampirantiana : Mahavariana ny « Tany mena » an’ilay maorisiana kim Yip Tong -
AccueilVaovao SamihafaFampirantiana : Mahavariana ny « Tany mena » an’ilay maorisiana kim Yip Tong
Hiarahan’ny sary sy ny feo. Taorian’ny fakana aingam-panahy sy famoronana teto Madagasikara, dia naranty tetsy amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo ny « Tany mena », izay vokatry ny asa nataon’ilay mpanakanto maorisiana Kim Yip Tong. Tanjon’i kim Yip Tong tamin’ity fampirantiana ity ny fanehoana an’i Madagasikara araka ny fahitany azy, miainga amin’ireo zava-kanto asehony toa ny hosodoko, raki-tsary… Hita taratra amin’ireo sangan’asany ireo kolontsaina Malagasy, ary indrindra ny fandalovan’ny fanjanahatany izay notarifiny tamin’ireo taon-trano samihafa hitany teto an-drenivohitra. « Hita taratra ihany koa anefa fa mivoatra ary miezaka maneho ny maha-izy azy ny tanàna », araka ny fanamarihany.
Ankoatra io fampirantiana sy famoronana nataony nandritra ny herinandro vitsivitsy teto Madagasikara, dia zava-dehibe tao anatin’ny fandaharam-potoanan’ity mpanakanto maorisiana ity ihany koa ny fihaonana sy fifanakalozana tamin’ireo mpanakanto malagasy.
Nianatra manokana momba ny kolontsaina tany Paris sy tany Londres i Kim Yip Tong. Ankoatra ny hosodoko dia anisan’ny nahafantarana ity mpanakanto ity ihany koa ny vokatra raketina anaty horonanan-tsary na horonam-peo.